प्रेम जालमा खर्लप्प, १ लाख ५० हजारको लागि प्रेमको नाटक गरेको खुलासा - BirtaJyoti
Homeस्थानीय समाचारमेन स्टोरी
प्रेम जालमा खर्लप्प, १ लाख ५० हजारको लागि प्रेमको नाटक गरेको खुलासा
super userAugust 1, 2019 10:04 am 0
झापा । प्रेमजालको पासोमा परेर कतिपयले आफ्नो घरबार देखि जीवन नै समाप्त पारेका घटना पर्याप्त छन् । खासगरी पर्याप्त सम्पत्ति भएका घरका युवा, पुरूषहरू यसरी प्रेमजालमा परी बर्बाद भएका छन् ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै माया प्रेमको नाटक मञ्चन गरेर ठग्ने क्रम बढेको छ । यसै बहानामा कतिले परिवार गुमाएका छन् त कतीले जिन्दगी भरी कमाएको पैसा र इज्यत मायाकै जालमा जेलिएर गुमाएका घटना धेरै छन् ।
झापा बिर्तामोडका एक व्यवसायीलाई ‘हनिट्रयाप’मा पार्दै ४० लाख रकम माग्ने चार जनालाई प्रहरीले गत मंगलबार
सार्वजनिक गरेको थियो । पैसा कमाउनकै लागि योजनाबद्ध रुपमा रुपमा व्यवसायीलाई केटीको प्रयोग गर्दै रकम असुल्न खोज्दा उनीहरु उल्टै फँसे । व्यवसायीको हैसियतभन्दा बढी रकम डिमाण्ड गरेपछि योजनाकारहरु फँसे ।
प्रहरीले बिर्तामोड–४ घर भएका मिराज खान, इलाम घर भए बिर्तामोड–२ मा बस्दै आएकी ऋतु फियाक लिम्बु, भारत पश्चिम बङ्गाल, जिल्ला दार्जीलिङका सञ्जय क्षेत्री भनिने सुजन शङ्कर र बिर्तामोड–४ का प्रकाश दासलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ भने काशिद शेख आलमलाई फरारको सूचीमा राखेर खोजी गरिरहेकोे छ । बिर्ताज्योतीले यसपटकको विशेष खोजमा यो काण्डका सम्लग्न भएकाहरुको बारेमा तथ्य बाहिर ल्याउने कोशिष गरेको छ ।
बिर्तामोडमा लामै समयदेखि बसोबास गर्दै आएका खान केही वर्ष पहिलासम्म ग्यारेजमा काम गर्ने गर्थे । अहिले मोटरसाइकलको रिकण्डिसन हाउस चलाउने खानसँग करोडौँको सम्पत्ति अचानक बढेको स्रोतले बतायो । देखावटी रुपमा रिकण्डिसन हाउस सञ्चालन गरे पनि खानले व्यापारीसँग मिटर ब्याजमा लाउने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । पैसा मिटर ब्याजमा लाउने र पहिलेनै जबरजस्ती चेक कटाउने गरेका खानको साथबाट ५० वटाभन्दा बढी त्यस्ता चेकसमेत अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले फेला पारेको छ ।
यो घटनाको मुख्य योजनाकार पनि खान नै रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका डिएसपी मोहनकुमार थापाले बताए । खानले यस घटनामा सम्लग्न व्यापारीको पनि तीन लाख रुपैयाँ पैसा चलाएको स्रोतले बतायो । खानले सुजन शङ्करको समेत ११ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । खानले शङ्करलाई व्यापारी फसाउने योजना सुनाएर आधा हिस्सा दिने बताएपछि शङ्करले भारतमा रहेकी उनकी प्रेमिका ऋतु फियाक लिम्बुलाई बोलाएका थिए ।
सञ्जय क्षेत्री भनिने सुजन शङ्कर
कही समय अघिसम्म बिर्तामोडको कृषिथोकमा एक होटल सञ्चालन गरी यौनजन्य गतिविधि गराउने गरेका शङ्कर र उनकी श्रीमतीलाई प्रहरीले मानबेचबिखन मुद्दा चलाएको थियो ।
झापा जिल्ला अदालतले दुई वर्षअघि १० वर्ष कैद फैसला सुनाए पनि शङ्कर फरार रहेका थिए । उनकी श्रीमती सुस्मा चौधरी भने अहिले जेलमा नै रहेकी छन् । त्यहीबेला होटलमा आइजाई गर्ने गरेकाले शङ्करको चिनजान ऋतुसँग भएको जानकारहरु बताउँछन् । श्रीमती जेल गएसँगै उनीसँगको भेटघाट प्रेममा परिणत भएको हो ।
ऋतु फियाक लिम्बु
इलाम घर भएकी लिम्बु पहिले बिर्तामोड नै बस्थिन् । अहिले दिदिसँग भारतमा बस्दै आएकी उनी यही कामको लागि पे्रमीसँग १ लाख ५० हजारमा डिल गरि आएको प्रहरीले जनाएको छ । बागडोग एयर पोटमासम्म उनललाई लिन पुगेका खान र शङ्कर पुगेका थिए । बागडोगाबाट बिर्तामोडसम्म आउँदा गाडीमै सबै योजना खानले लिम्बुलाई बुझाएको प्रहरीले बतायो । सोही योजना अनुसार नै उनले व्यवसायीलाई मायाजालमा फसाएर भेट्न बोलाएकी थिन् ।
के हो ‘हनिट्रयाप’ ?
यसलाई अपराधको अर्को रूप ‘हनिट्रयाप’ भन्ने गरिएको छ । युवतीहरू प्रायः सुन्दर, खानदानी देखिने र सेक्सी समेत बन्छन् । जो चाँडै प्रेम बन्धनमा बाँधिएको नाटक गर्छन् । युवक अथवा पुरूषले प्रस्ताव राख्न हिचकिचाए पनि प्रस्ताव राख्छन् र कुनै नाटक गरी समस्या सुनाउँछन् । समस्या सुनाउँदा पनि काम नभए अपहरण गरी रकम हात पार्छन् ।
प्रायः यस्ता युवतीको गिरोह नै हुन्छ । भारतमा यस्तो गिरोहको ठूलो सञ्जाल छ, जुन नेपालसम्म विस्तार भइसकेको छ । यो अलग प्रकारको अपराध हो । यसमा प्रेमजालको पासो थापेर लुट्नेर भाग्ने या हत्या गर्नेसम्मका काम हुन्छन् ।
यस्तो गिरोहले सम्बन्धित व्यक्तिलाई लामो समयदेखि अध्ययन गरेर उसको पछि लागेको हुन्छ । कुनै न कुनै बेला आफ्नो जालमा फँसाएर ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, त्यसले पनि काम नगरे अपहरणसम्म हुने गरेका कतिपय घटनाका प्रकृतिले पुष्टि गर्छ । कतिपय घटना उच्च घरानीय धनाढ्य अथवा व्यापारी व्यवसायीले प्रहरीसम्म आउन नदिने वा नचाहने पनि हुनसक्छ । यसकारण यो प्रकृतिको अपराध भइरहेको हुन्छ ।
लुटपाटका लागि मात्र नभएर कतिपय राष्ट्रिय सुरक्षाका गोप्य जानकारी लिनका लागि सुरक्षा अधिकारीलाई पनि ‘ हनिट्रयाप’को माध्यमबाट फसाउने गरिँदै आएको छ । हनिट्रयाप रुसबाट सुरु भएको थियो । अमेरिकाका गोप्य जानकारी हात पार्नका लागि सीआइए अधिकारीबाट सूचना चुहाउन रुसले राम्री युवतीहरू खटाउने गर्दथ्यो । जसमा अधिक सफलता मिलेको भन्ने चर्चा रुसमा भयो । कुटनीतिक, सुरक्षा संयन्त्रका वैधानिक जानकारीका लागि अवैध हिसाबका मिसनका रूपमा सुरु गरिएको हनिट्रयाप नेपालसम्म आइपुग्दा अपराधको एउटा नयाँ श्रृङ्खला बनिसकेको छ ।
CATEGORIES मेन स्टोरीस्थानीय समाचार
TAGS AffiliateLeague of Legends
झापामा आज हैन भोली बिदा
admin- March 20, 2019
झापा । सरकारले झापासहित पहाडका ५८ जिल्लामा फागु पूर्णिममा अर्थात होली पर्वको सार्वजनिक विदा चैत ६ गतेका लागि उल्लेख भए पनि चैत ७ गते सार्वजनिक ... Read More
झापामा कारको ठक्करबाट भारतीय नागरिकको मृत्यु
admin- March 27, 2018
झापा । कारको ठक्करबाट झापा भद्रपुरमा एक जना भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा भारत पश्चिम बंगाल दालखोला घर भई हाल भद्रपुर–६ मा ... Read More
धुलाबारी खानेपानीको साधारणसभा कर्मचारीबाटै बहिस्कार
झापा । संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई समितिले गर्ने सम्मानमा सधैंभरि विभेद गरेको विरोधमा धुलाबारी खानेपानी उपभोक्ता समितिका कर्मचारीले साधारणसभा नै बहिस्कार गरेका छन् । सोमबार आयोजना ... Read More
NEWER POSTतरकारीको भाउ तेब्बर, भद्रपुर नाकाबाट बिषादी युक्त टमाटर भित्रदै
OLDER POSTवर्डा कार्यालयमा नेपालको झण्डा उल्टो
आज द्रोणाचार्य क्षेत्री भएको भए…
ब्राउन सुगर प्रयोग गर्ने डाक्टर पक्राउ !
मानव बस्तीको बिचमा उद्योग